Xisbiga Himilo Qaran oo shaqada ka ceyriyay xoghayihii Xisbiga – Somali Top News
Xisbiga Himilo Qaran oo shaqada ka ceyriyay xoghayihii Xisbiga
December 3, 2019 Somali Top News	0 Comments Xisbiga Himilo Qaran oo shaqada ka ceyriyay xoghayihii Xisbiga
Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ahaa Xog hayihii Xisbiga Himo Qaran ee hoggamiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa laga eryay Xubinimada Xisbigaas,ka dib Khilaaf soo kala dhexgalay.
Guddiga Fulinta ee Xisbiga Himilo Qaran ayaa kulan ay ku yeesheen Magaalada Muqdisho waxa ay uga dhawaaqeen in ay ka joojiyeen Xubinnimadii Xisbiga Xildhibaan C/xakiim Macalin Axmed oo ahaa Xoghayahii Guud ee Xisbiga.
Xildhibaan C/xakiin Macalin Axmed Maalin oo ka hadlay Go’aanka ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo aqbalaada uu Xisbiga Himilo Qaran ku ogolaaday inuu isaga tago Xubinimadii Xisbiga, kaddib markii ay isku aragti ka noqon waayeen arrimo masiiri ah oo ay labada dhianc xalin waayeen.
Waxaan soo dhaweynayaa aqblaadda uu Xisbiga Himilo Qaran ee aan ka tirsanaa ku oggolaaday inaan isaga tago xubinnimada xisbiga, maadaama aan isku ku aragti ka noqon waynay arrima masiiri ah oo aan xallin weynay.
Xildhibaanka ayaa Mudooyinkaan dambe ku sugnaa Magaaladda Dhuusamareeb ee Caasimada Maamulka Galmudug,waxa uuna wasaarada arimaha Gudaha Soomaaliya kala shaqeeynayay dhismaha Maamulka Galmudug,sigoo dhawaan ka horyimid war ka soobaxay Madasha Xisbiyada qaran ee dalka.
← Dowladda oo ka digtay Fatahaad hor leh oo Soomaaliya ku soo foodleh
Duqa Muqdisho iyo wasiirka Dastuurka oo kulan ku yeeshay Muqdisho →
Aadan Barre” Farmaajo ka roonow Maamul goboleedyadda”
Booliska Philippines oo ka warbixiyay nin katirsan Al shabaab oo ay qabteen